21 taona no talen'ny Mozu Studios izay liana amin'ny miniature | Famoronana an-tserasera
Raha tamin'ny andro lasa izay dia nanana fotoana ahitantsika ireo varavarana ireo izay mandravaka ny faladian'ny rindrina, dia mankany amin'ny efitrano kely namboarina avy amin'ny fanadihadiana Japoney.
Asa fenoina antsipirihany avy amin'i Mozu Studios ary izany dia hahafaly ireo izay mahafoy tena amin'ny zavatra kely. Ireo zavatra rehetra ao anatin'ireny efitrano "mini" ireny dia noforonina sy noforonin'ity studio japoney ity. Ataovy.
Mahagaga ny haavon'ny antsipiriany ka raha tsy manome zavatra ho antsika izy ireo Rehefa azo refesina ny refin'ny fahamarinana dia gaga tanteraka izahay tamin'ny fomba tena izy.
Ny seza, ny boky na ny solosaina dia ao anatin'ny fananan-tany izay lasa tena izy hatramin'ny fotoana anaovanao azy Izahay dia mijery hatrany ny asan'i Kiyotaka Mizukoshi, izay 21 taona no talen'ity studio ity ary hatramin'ny faha-11 taonany dia tena liana tamin'ny kanton'ny miniature.
Raha fantatray ny ampahany amin'ny anton'ny antony ataovy ireo asa mahaliana ireo Izy io dia satria tiany ny mamorona zava-baovao ary mampifaly ny olona rehetra mankafy ny zavatra noforoniny.
Mozu Studios dia studio vao taona vitsivitsy ary miasa miaraka amin'ny marika malaza ankehitriny. Fianarana tena mampanantena izay tarihin'ny olona tia mamorona momba ny zavakantony ary toa tsy misy farany. Niara-niasa tamin'ny Starbucks, mpanamboatra telefaona ary mpanao dokam-barotra izy.
Azonao atao ny manaraka ny asan'izy ireo avy amin'ny Kaonty Instagram ary ho isan'ny mpanaraka maherin'ny 100 amin'ity fandalinana ity izay manana ho avy lehibe mialoha izany.
Si toa anao amin'ny kanto miniature Aza adino ity studio tarihin'ny mpamorona 21 taona ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Efitra kely 30 novolavolan'ny studio Japoney Mozu Studios
Raha manana takelaka Android na Chromebook ianao dia sambatra ianao: misy i Krita ankehitriny